Mhandara - Wikipedia
Mhandara kana mhandwe kuChiNdau (virgin in English) musikana asati amborara nemurume kuita zvebonde kana kuti ane chipfuva chimbishi. Kana musikana achinge abva humhandara pane rukanda runonzi katahwi rwunodambuka paanosangan nemurume. Nekumwe kutaura kubva humhandara kunonzi kuboorwa. Tsika zhinji dzemuAfrica dzinokoshesa kuti musikana asvike pakuroorwa ari mhandara.
MuZimbabwe kana musikana achiroorwa kune zvirango zvinobhadharwa zvokutenda kuti musikana akawanikwa ari mhandara. Chirango ichi chinonzi chimanda. Kazhinji chimhanda chinobhadharwa iri mbudzi kana mombe, uye chinounzwa pamwe negumbeze.
Kana musikana achinge awanikwa asiri mhandara mombe yechimanda haibviswe. Vamwe vanosarudza kudaro vanobvisa gumbeze rinenge raboorwa buri, asi vamwe havatevedzi maitiro aya nokuti vanoti kunyadzisa munhu achave mudzimai wako paruzhinji.
Kune dzimwe nyika kwave nezvinoitwa nana chiremba kugadzirisa katahwi kanenge kadamburwa apo musikana anorara nemurume. Mukutaura kwemazuvano vechidiki vanoti musikana akabva humhandara anonzi mvandara, kureva kuti ave mvana isina mwana.
Usikana idambakamwe chikuru humvana. Apa kureva kuti kana humhandara ukaira wadyiwa nemunhurume hwatoenda hauchadzoka.
Ko kuti chigagairwa chemhandara zvinorevei?
Ringira, mhandwe inozoita mimba, inozobereka mukororo, inozodudza zina rake kuti Imanueri: A virgin is pregnant; she will have a son and will name him Immanuel. (Isaiah 7:14, Bhaibheri reChiNdau).
Vamwe vatauri vanoti muvirigo (Virgin - from Latin virgo) kureva mhandara.
Hwanzvo kana homba (Girl of advanced marriageable age not yet engaged) zvinoreva tsikombi kana musikana wezera rekuroorwa asi asati awanikwa.
VaSwahili vanoti kimanda (right, correct, true; genuine; fitting, proper; due). VaLenje vanoti musimbi (big girl, young woman) kureva musikana akura.
VaNgala vanoti nduma (n. single, unmarried). VaNyungwe vanoti dende kana madende (n. virgin/s) kureva mhandara.
VaDigo vanoti mwanamwali (n. virgin) kureva mhandara. VaGanda vanoti mwala kana bala pakuwanda (n. virgin/s) kureva mhandara.
VaGwere vanoti buguuna ( n. virginity; inviolate state, not tampered with sexually), humhandara. VaWanga vanoti ulukhana (n. girlhood, virginity, hymen).
VaLuba vanoti mvrigo (n. virgin. from Latin virgo) kureva mhandara. VaTiriki vanoti mukosi (virgin) kureva mhandara.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mhandara&oldid=83428"
Last edited on 17 Ndira 2021, at 19:30
This page was last edited on 17 Ndira 2021, at 19:30.